Mahaliana any Krabi, Thailand ~ Journey-Assist - torapasika Krabi
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Krabi
Krabi (Krabi). Thailand
Zavatra mahaliana ao Krabi
Krabi Lakes: Blue, Emerald, Crystal
Rano Mafana Ririnina
Klong Tom Salt Springs
Tempolin'i Tiger Wat Tam Sua (Temple Tiger Cave Temple)
Cave Lang Rongrian
Huai To Tondra-drano
Khao Pan Bencha National Park
Cao Pueng Cave
Tempoly sy Tranombakoka Wat Klong Tom
Natta Wari Hot Springs
Pai Plong (Centara Grand Beach Hotel Beach)
Krabi dia faritany Thailand any atsimo-andrefana atsimo. Manodidina ny 700 km ny lavitra an'i Bangkok. Ny faritra manontolo ao amin'ny faritany Krabi, izay ahitana ny tanibe sy ny nosy kely maro, somary mihoatra ny 4 metatra toradroa. km. Ny tanibe sy ny nosy Krabi dia voasasan'ny Ranomasimbe Andaman, izay ampahan'ny Ranomasimbe Indianina. Ny tombony amin'ity faritra ity dia ny toetry ny virjiny tsara tarehy, ny torapasika fotsy madio any amin'ireo nosy sy ny rano madio. Ity misy iray amin'ireo tranainy indrindra amin'ny tahiry velona sisa velona amin'ny planeta, izay mihoatra ny 700 tapitrisa taona ny taonany. Noho ny zaridainam-pirenena, lava-bato, vatolampy, ala honko, riandrano ary loharano mafana, i Krabi dia nanjary be mpitia tamin'ireo fialantsasatra amoron-dranomasina, ny yachting, ny fisandremana, ny toafika, ny snorkeling, ny fizahantany, ny fizahantany.
Faritra Krabi dia rakotra tendrombohitra, havoana ary honko. Ny tanàna Krabi no tena mipetraka, ka ny renirano Krabi dia mikoriana ao amin'ny Ranomasin'i Andaman. Betsaka koa ny lakandrano manomboka ny faritry Panifom Bencha massif.
Ny anaran'io faritany io amin'ny fiteny Thai dia midika hoe “sabatra” ary tsy mifandraika amin'ny crustacean an-dranomasina.
Isaorana ny nosy teto izay taitra tamin'ny tsunami nahatsiravina tamin'ny 2004, dia maty ny onja nahafaty talohan'ny nahatongavany teto amin'ny tanibe. Misaotra an'izany, tsy voadona ny morontsirak'i Krabi.
Ao Krabi, dia misy ny amoron-dranomasina Shell Fossi tany am-boalohany, izay rakotra akorandriaka amin'ny mollusk prehistoric. Io irery no tora-pasika ao Krabi, milomano izay voararan'ny lalàna.
Ny entana malaza amin'ny Krabi dia mitafy akanjo landy, firavaka voahangy, lovia vovo-tany, laisoa durian ary orkide.
Midina ao anaty rano ao amin'ny iray amin'ireo toeram-pitrandrahana ao Krabi, mahita karazana trondro tsy fahita firy ianao - antsantsa potika iray.
Isaky ny trano fandraisam-bahiny any Krabi, ary koa ao amin'ny tanànan'i Krabi dia afaka mividy fitsangantsanganana ho any amin'ireo toerana mahasarika rehetra eo an-toerana ianao. Ny fivarotana etsy amin'ny hotely sy eny an-dalambe no amidin'izy ireo. Ny fitsangatsanganana mitovy dia saika mitovy amin'ny toerana rehetra. Ny tsy fitoviana amin'ny vidiny dia mety hitranga raha tsy ilay trano fandraisam-bahiny izay hividiananao fitsangatsanganana dia any amin'ny toerana tsy lavitra ny fonenana. Amin'ny fotoana fividianana, mendrika hanamarina raha misy ny vidiny dia misy ny saram-pidirana ho an'ireo nosy na amin'ny fidirana amin'ny faritry ny fizarana, ary koa ny fanofaanana sakafo sy fitaovana.
Nahaliana an'i Krabi. zavatra hita
Krabi Lakes: manga, emeraoda, kristaly
Ny zoro mahafinaritra an'i Krabi, fidirana izay misokatra isan'andro manomboka amin'ny 8 ka hatramin'ny 17.
Ny tapakilan'ny olon-dehibe iray eto dia mahatratra 200 baht, ary ny vidin'ny tapakila iray dia 100 baht.
Ireny fitahirizana ireny dia hita any amin'ny 60 km miala ny tanànan'i Krabi. Ny fomba mety indrindra hahatongavana eto dia ny hividy fitsangatsanganana. Izany dia azo atao amin'ny trano fandraisam-bahiny rehetra sy any amin'ireo hotely lehibe na lehibe kokoa Krabi, ary koa ao amin'ny Phuket. Na izany aza, mazava ho azy, afaka manofa fiara na bisikileta ianao ary tonga amin'ny tenanao.
Toerana iray tena mahafinaritra. Eto ianao dia afaka mandamina kayak. Mandritra izany fotoana izany, ireo olona tsy manana traikefa an-tsambo amin'ireto sambo ireto dia tsy azo atahorana satria somary tsotra fotsiny izany. Ny fahaiza-manao manokana dia tsy ilaina eto, na ny zaza aza dia afaka mahazaka lakana. Afaka tonga any amin'ny hanoanana ianao amin'ny fividianana fitsangatsanganana amin'ny iray amin'ireo resorts an'i Krabi.
Afaka tonga any Ao Tha Len amin'ny andro ianao. Tonga amin'ny karazana 3 ny fitsangatsanganana: amin'ny tapany voalohany amin'ny andro (alohan'ny sakafo atoandro), amin'ny tapany faharoa amin'ny andro (aorian'ny sakafo hariva).
Ny vidin'ny fitsangantsanganana amin'ity lano ity dia manomboka amin'ny 500 baht amin'ny antsasaky ny andro. Ny vidiny ambony indrindra dia 1 baht (ho an'ny fitsangatsanganana mandritra ny andro, ao ny fitsangantsanganana elefanta). Eo amin'ny tranokala dia afaka manofa sambo tsy misy torolàlana amin'ny vidin'ny 500 baht ianao.
20 km avy ao Ao Nang Resort no misy azy. Mora kokoa ny fahatongavana eto ho mpandray anjara amin'ny fitsidihana, fa afaka manofa fiara / bisikileta koa ianao, ary avy eo dia ampiasao ny fanofana kayak ho any akaikin'ny teloka.
Ireo loharano mafana ireo no tena malaza any Krabi. Ny vondrona mpizahatany dia alaina eto foana ho ampahany amin'ny fitsangatsanganana. Ny mampiavaka an'ity toerana ity dia ny fidad feno rano mafana dia miforona vokatry ny fikolokoloana voajanahary.
Mihintsan-drano ny rano avy amin'ny renirano, mikoriana riandrano kely maromaro ao anaty fitoeran-drano izay ahafahanao milomano. Marina fa somary malemy ilay fanasitranana amin'ny rano eo an-toerana, noho io antony io dia afaka mandro ao anatiny mandritra ny fotoana maharitra ianao. Ny ankabeazan'ny mpizahatany eto dia manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 14, ka tsara kokoa ny tonga amin'ny tenanao rehefa avy misakafo.
Ny fidirana amin'ny loharano mafana dia misokatra fito andro isan-kerinandro manomboka amin'ny 8 ka hatramin'ny 17 ary mitentina 90 baht.
Afaka tonga eto ianao ho ampahany amin'ny fitsangatsanganana, na izany aza, noho ireo antony efa voalaza teo ambony dia tsara kokoa ny manatona anao amin'ny bisikileta / fiara na taxi. Manodidina ny 60 km ny elanelan'ny loharano renirano Ron mankany amin'ny tanànan'i Krabi. Misy fakana ny vola (vidiny - 5 baht).
Ranon-tsolika mafana Klong Tom (Salty Hot Springs Khlong Thom)
Ireo loharanom-baovao 2 ireo dia tena mifanakaiky. Amin'ireo loharano rehetra ireo ao Krabi, eto dia ny rano no mafana. Talohan'izay, tsy andoavany ny fitsidihan'izy ireo, satria saika tsy tonga teto ireo vahiny, ka ny loharanom-baovao dia saika nampiasain'ny mponina teo an-toerana fotsiny mba hampodiana azy. Ankehitriny, lasa faritany, ity lalana ity, lalana, dobo no natao teto, saingy mila mandoa ny fitsidihana ianao, mazava ho azy. Teo akaikiny dia ny Hotely Saline Hot Water Springs no naorina vao haingana.
Ny fidirana eto dia misokatra mandritra ny fito andro isan-kerinandro manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 20 ary ny vidin'ny 100 baht.
Avy any Khlong Thom ka hatrany Krabi Town manodidina ny 55 km. Afaka mandeha amin'ny alàlan'ny fiarakaretsaka ianao na amin'ny fiara fitateram-bahoaka manofa.
Cemetery Shell (Shell Fossil Beach)
Toa misy vato lehibe akaikin'ny morontsiraka, izay miverina tsikelikely amin'ny rano. Avy amin'ny vatolampin'ny akorandriaka. Naharitra an-tapitrisany taona ny fizotran'ny fananganana azy. Ny sakan'ny kianja dia 0,4 m ny salanisa. Amin'ireto mavesatra ireto dia misy lalana voahitsakitsaka. Mbola eto ihany, ambanin'ny lanitra misokatra, misy zavatra toy ny tranom-bakoka noforonina, izay singa santionany misy takelaka misy ny famaritana azy ireo.
Ianao dia mila mandeha any amin'ny fasana misy ny akorandriaka amin'ny alàlan'ny zaridaina maitso, izay misy gazebos sy bangko. Misy birao tapakila eo akaikin'ny fatana, na izany aza, ny mpivarotra tapakila dia matetika tsy misaraka aminy, ka tsy hisy olana amin'ny andalana malalaka. Na dia eo amin'ny latabatra vola aza ny mpivarotra dia afaka mora foana sy mandry am-pasana any amin'ny fasan'ny akorandeha amin'ny lalana hafa ianao, amin'ny alàlan'ny alàlan'ny latabatra vola. Mbola misy souvenir amin'ny akorandriaka.
Ity toerana ity dia azo heverina ho tsy maintsy raisina mihitsy ho an'ny fitsidihana, indrindra satria haharitra ela vao hahatongavana amin'izany. Eo anelanelan'ny tanànan'i Krabi sy ao Ao no hanaovana azy, ary mila hanao arabe mihintsy ianao raha te ho avy eto.
Afaka mandeha any amin'ny fasan'ny ranomasina ianao amin'ny fotoana rehetra, saingy tsara kokoa ny manao izany rehefa mazava ny andro.
Ny tapakilan'ny olon-dehibe iray eto dia vidiny 200 baht, ankizy iray - 100 baht. Na izany aza, arak'izay efa nolazaina teo, dia afaka miditra amin'ny maimaim-poana ianao.
Ny Cemetery Shell no misy eo akaikin'ny Ao Nammao Marina. Afaka mandray minibus ao Ao Nang izay mandeha avy any Ao Nang mankany amin'ny Shell Fosil Beach ianao (ireo isa 2 ireo dia voasoratra amin'ny teny anglisy) isan'andro amin'ny 6 ka hatramin'ny 17. Amin'ny fitaterana tsy miankina, mandehana any Ao Nang, avy eo mitodika ny làlambe mankany amin'ny Nang. Ao Nang, miankavia ankavia - toeran'ny pointer to Shell Fossil Beach manondro.
Akademia Krabi (Ivom-pikarohana sy fampandrosoana momba ny jono)
Any akaikin'ny fasana misy ny akorany etsy ambony no misy azy ary tsy trano fialamboly. Io dia ivom-pikarohana ho an'ny jono amoron-tsiraka, izay somary manao tsinontsinoavina nefa tsy dia tsara tarehy akory. Misy dobo maromaro misy hazandrano trondro ho an'ny fianarany. Ireo bridges dia namboarina tamin'ireny fitahirizan-drano ireny. Biby trondro sy zavamaniry maro hafa no miaina ao anatiny, fa maizina kosa ny rano, ka tsy azo atao ny mivoaka, afa-tsy mandritra ny famahanana dia misy fivoahana mazava.
Ny ampahany tena mahaliana amin'ity andrim-panjakana ity dia ny pavillon, izay ahitana dobo kely sy aquarium. Ireo fakantsary ireo dia maloto, nefa mbola mampiseho trondro, biby mandady sy molobolo mahaliana maro.
Misokatra isan'andro ny aquarium manomboka amin'ny 8.30 ka hatramin'ny 16.30.
Omena maimaim-poana ny olona rehetra, fa fanomezana an-tsitrapo ihany no ekena.
Ny aquarium dia hita eo akaikin'ny lalana mankany amin'ny fasan'ny akorandriaka. Voamarika amin'ny tarehim-trondro.
Tempolin'i Tiger Wat Tham Sua
Ny anarana iray hafa amin'ity zavatra ity dia ny Tiger Cave. Io no lehibe indrindra amin'ireo tempolin'ny faritany Krabi.
Izy io dia tranobe maritrano, izay ahitana trano sy sary sokitra marobe. Ho an'ny lava-bato, izay tempoly, misy tohatra izay misy dingana 1237 ary mitondra mankany amin'ny tampon-tendrombohitra, izay misy tsangambato Buddha lehibe, ary koa monasitera sy lalan'ny natiora ao anaty ala. Tsy hita eto ny tigra velona.
Ny fototry ny fahasarotana dia ny zohy akaikin'ny tendrombohitra tendrombohitra, izay ahitana tsangambaton'i Buddha sy fitaovam-piasan'ny Bodista hafa. Ny singa manintona ny ensemble maritrano dia ny tohatra voalaza, izay mitondra mankany an-tendrombohitra 600 metatra ny haavony. Avy any ambony dia misokatra ny fomba fijery ny faritany Krabi iray manontolo.
Rehefa vita ny trano rehetra dia afaka mandehandeha any amin'ny zaridainan'i Khao Khaokaeo Vipassana, izay ametrahana ny làlan-dàlana dia misy, misy lava-bato sy sela mpizara.
Afaka mandeha eto ianao amin'ny fotoana rehetra. Tsy aleo ny fidirana.
Any amin'ny afovoan-tanànan'i Krabi no misy ny tempoly. Afaka mandeha eto ianao amin'ny alàlan'ny fitaterana tsy miankina na taxi-be taxi (ny vidiny avy any an-tanànan'i Krabi dia eo ho eo 9 baht), azonao atao koa ny manao fitsangatsanganana any Krabi, ao anatin'izany tempoly izany. Ho fanampin'izany, eto ny tonga ny minibus mena avy any Krabi Town, izay azonao raisina eny amin'ny Lalana Thanon Utarakit (mivezivezy amin'ny promenade) - amin'ity tranga ity dia ho 100 baht ny saran-dàlana (raha mandeha mivantana any amin'ny tempoly) na 50 baht (raha mandeha alohan'ny fihodinana fotsiny ianao) mankany Wat Sam Sua eo amin'ny lalambe lehibe, ary mandehana ary mandeha.
Goa Lang Rongrian
Izy io dia iray amin'ireo lava-bato manakaiky ny tanànan'i Krabi. Eto dia natao ny fangalarana arkeolojika, izay nahitana ny zavakanto taloha sy ny sisa tavela amin'ny olombelona, ​​izay mihoatra ny 37 taona no fahitana azy. Ny habea dia kely habe.
Raha mitsidika ity toerana ity dia tokony maka mpitsikilo miaro amin'ny moka ianao, satria misy maro amin'izy ireo.
Afaka mandeha eto ianao amin'ny fotoana rehetra, fa tsara kokoa ny miditra amin'ny antoandro.
Tsy miditra ny fidirana amin'ny zohy. Eo am-pidirana kosa, matetika ireo mpizahatany no arahaba ireo mpianatra avy amina sekoly akaiky manolotra fialantsasatra Lang Rongrian amin'ny fantsom-pifandraisana mini (tsy mihoatra ny 50 baht).
Afaka mitondra afa-tsy amin'ny fitaterana tsy miankina ianao na taxi. Ny lalana mankany amin'ny zohy dia mora mahita famantarana.
Randranon'i Huay Toh
Rano lehibe iray izy io, misy cascades 11. Na dia mandritra ny vanin-taona maina aza dia feno rano izy ireo, hahafahanao mankafy azy ireo ary handamina sary tsimoka. Amin'ny ambaratonga maromaro dia misy tahiry voajanahary azo anaovana lomano. Làlana mihazakazaka manaraka ny riandrano no mankany amin'ny tampony, izay manomboka misokatra ny fomba fijery mahafinaritra. Misy ihany koa ny dobo filomanosana voajanahary, izay misy olona betsaka kokoa noho ny hafa eto ambany.
Huai Tho dia mipetraka ao amin'ny zaridainam-panjak'i Khao Phanom Bencha ary toerana mpitsidika mpizahatany be mpitsidika indrindra ao amin'ny faritanin'i Krabi. Ho fanampin'ny fitrandrahana ny riandrano dia misy dia fohy kely ao amin'ny zaridainam-pirenena, azo atao ny miala voly ao amin'ny gazebo na piknik.
Misokatra fito andro isan-kerinandro manomboka amin'ny 8.30 ka hatramin'ny 16.30 ny fidirana eto.
Tsy misy vidiny fidirana amin'ny riandrano io, fa ny fidirana ao amin'ny zaridainam-pirenena dia voaloa: vidin'ny tapakila olon-dehibe 200 baht, ny tapakilan'ny ankizy 100 900 baht. Afaka mandray fitsangatsanganana any Huai To ianao, manomboka amin'ny XNUMX baht ny vidiny.
Ny riandrano dia famangiana iray ora iray avy ao amin'ny tanànan'i Krabi. Afaka mandeha any ianao amin'ny alàlan'ny fiara fitaterana tsy miankina na taxi, na amin'ny fitsangantsanganana mankany amin'ny zaridainan'i Khao Phanom Bencha.
Khao Phanom Bencha National Park)
Ny faritaniny dia manarona ny tehezan'ny Tendrombohitra Phanom Bencha sy ny tongony. Ny haavon'ity tendrombohitra ity dia 1 m. Ny velarantany dia misy velarana 397 metatra toradroa. km.
Manakaiky ny vavahady lehibe amin'ity zaridaina ity no Huai To waterfall any Krabi, ary koa ny riandrano hafa. Misy renirano maro, loharano, ala madio. Orkide maniry. Manankarena ihany koa ny fauna: bibikely maro, hala (ao anatin'izany misy poizina, ka mila mitandrina), bibilava (tokony ho mailo) koa, ary misy vorona tsy fahita firy koa - Pitt Garney, endrik'i Krabi.
Misokatra fito andro isan-kerinandro i Khao Phanom Bencha Park manomboka amin'ny 8 ka hatramin'ny 16:30. Tsara kokoa ny ho maraina na amin'ny hariva, satria ny antoandro dia tafangona eto ny vahoaka.
Ny tapakila iray eto dia mahatratra 200 baht. Vola amidy eo akaikiny no aloa: ho an'ny fiara - 50 baht, ho an'ny bisikileta - 20 baht.
Mila mitondra fiara eny amin'ny zaridainanao mandritra ny adiny iray miala ao Ao Nang, na 40 minitra miala ny tanànan'i Krabi. Afaka tonga amin'ny fiara fitaterana tsy miankina ianao, na taxi na amin'ny fitsangantsanganana (ny vidiny izay manomboka amin'ny 900 baht). Mandeha irery ianao, dia afaka mahita mora foana ny lalana mankasitraka an'ireo famantarana.
Goaona Khao Phueng
Raha ny marina dia kompana tanteraka lava-bato io (anarana iray hafa dia Khao Phueng ny tenany), izay 1 km miala ny vavahady lehibe mankany amin'ny zaridainan'i Khao Phanom Bencha. Ny halavan'ny lava-bato lehibe indrindra dia mihoatra ny 500 m. Mba handinihana azy io tanteraka dia mitaky 3 ora. Betsaka ny stalagmites hafahafa sy stactte ao.
Tsy misy fitaovam-piasana ao amin'ity lava-bato ity ho an'ny fizahan-tany mpizahatany, koa tokony hitondra ny lanternanao ianao. Mbola eto ny moka dia maro be no ilaina, noho izany dia takiana amin'ny famerenana azy ireo.
Misokatra amin'ny fotoana rehetra ary hiditra maimaim-poana ny fidirana eto.
Ity lava-bato ity dia misy zato metatra miala ny fidirana amin'i Khao Phanom Bencha. Tsy misy ny teboka. Mba hahitana io zavatra io dia mila mampiasa ny navigateur ianao na manontany ny mponina eo an-toerana.
Tempoly sy Tranombak'i Wat Khlong Thom
Talohan'izay, tsy niseho teo amin'ireo tempolista bodista an'arivony tany Thailand i Klong Tom, fa indray mandeha no nisy tranom-bakoka iray naorina tamin'ny faritany. Ity farany dia ahitana zavatra hita nandritra ny fangalarana ny tanàna taloha teo akaikin'ny tempoly ankehitriny, ary koa ireo izay natsangana avy amoron'ny lakandranon'i Klong Tom any amin'ny toerana izay inoan'ny mpahay tantara fa tamin'ny andro taloha dia misy seranana ara-barotra eo amin'ny lalan'ny sambo mampitohy an'i Azia amin'ny kontinanta hafa. Anisan'ireny ny fitaovana varahina, vola madinika antitra, firavaka, seramika sy zavatra hafa, izay misy mihoatra ny 2 taona. Na izany aza, toa tsy mahaliana ny rehetra ity tranombakoka ity - tsy misy afa-tsy amin'ireo buffs tantara lehibe.
Misokatra mandritra ny fito andro isan-kerinandro ny tempoly sy ny tranombakoka manomboka amin'ny 08.30 ka hatramin'ny 16.30, ary miala sasatra manomboka amin'ny 12 ka hatramin'ny 13. Raha voahidy ny varavarana ho an'ny tranombakoka mandritra ny ora fiasana dia mila mandondona hanokatra ianao.
Tsy misy vidiny miditra ao amin'ny tempoly, raha ny olon-dehibe kosa mandoa 100 baht ho an'ny fidirana amin'ny tranombakoka ary 50 baht ho an'ny ankizy.
Wat Klong Tom no misy 50 km miala an'i Krabi Town. Amin'ny farany dia mila mandeha manaraka ny lalambe Phetkasem ianao. Afaka mandeha amin'ny alàlan'ny fiara fitateram-bahoaka (manofa) ianao na amin'ny bisy, izay mankany Trang sy Koh Lanta. Safidy iray azo atao dia ny manambatra ny fitsidihana amin'ity tempoly ity miaraka amin'ny fitsidihana ny zaridaina emeraoda, satria ny làlana mankany amin'ny dobo dia tsy latsaky ny 1 km miala an'i Wat Klong Tom.
Rano mafana mafana Nattha Waree
Tsara kokoa noho ny hafa natao ho an'ny fialam-boly sy ny loharano mafana any Krabi. Any amin'ny faritry ny complexe pitsaboana no misy azy ireo, izay azo antsoina hoe sanatorium araka ny fanajanonan'ny Rosiana. Afaka misasa fandroana mafana eto ny tsirairay, afa-tsy ny mpitsidika ny sanatorium (mazava ho azy fa sarany).
Misy dobo mafana misy efitra fandroana, fandroana manokana, dobo rano mangatsiaka, efitrano fandraisam-bahiny iray, efitra fandroana, efitrano fitahirizana ary na dia tratran'ny trondro aza. Ny fialan-tsasatra dia omena lamba famafana, kapa, palitao ary rano fisotro manasitrana.
Ny vidin'ny fitsidihana loharano mafana dia 300 baht, ary ny vidin'ny efitrano iray amin'ny trano fantsom-pokontany iray dia manomboka amin'ny $ 50 isan'andro.
Misokatra fito andro isan-kerinandro manomboka amin'ny 8 ka hatramin'ny faha-20 ny fidirana eo amin'ny tanànan'i Krabi ny halaviran'ny 30 km eo. Afaka mandeha amin'ny taxi na fiara fitaterana irery ihany ianao.
Noppharat Thara amoron-dranomasina
Reniranon'i Tub Kaek
Railay West Beach (Railay West)
Pranang Beach (Phra Nang)
Beach Ton Sai
Ahoana ny fomba hidirana any Thailand. Jeografia. Airports.
Manofa fiara na bisikileta (scooter) any Thailandy
Krabi. Fampahalalana ankapobeny